ATTACK ON TITANS - Rtist Phyo - Wattpad
8.1K Reads 946 Votes 18 Part Story
By Rtist_Phyo Completed
နာမည်ကြီးJapan Anime Seriesတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Attack on Titanကို Yoonsic Ver.နဲ့ ပြောင်းရေးထားတာပါခင်ဗျ။
အခေါ်အဝေါ်တွေ၊ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေကတော့ Attack on Titanမကြည့်ဖူးသူတွေအတွက် နည်းနည်းတော့ ရှုပ်နိုင်ပေမယ့် အတတ်နိုင်ဆုံး စာရှုသူတို့နားလည်အောင် ရေးပေးထားပါတယ် ခင်ဗျ
Write with Heart, Trying my Best
lwanwuy Sep 07, 2016
MCHeart6 Sep 06, 2016
ကြိုက်တယ် ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကို မျက်လုံးထဲမြင်လာတယ် ထပ် dateပေးပါဦးနော်
MCHeart6 Sep 08, 2016
Get notified when ATTACK ON TITANS is updated
C.O.T.D:RISE OF THE DEAD
5.9K 505 43
C.O.T.D:Rise of the Deadသည် Author Rtist PhyoရေးသောZombie Seriesတစ်ခုဖြစ်သည့် Crisis of the Dead၏အဆက်(Season 2) ဖြစ်ပါသည်။
with Kim Soo Hyun
and Choi Minho.
5.4K 374 39
The End of Lonelines
(One shot ကရှည်သွားလို့ ရေးလို့မရတော့တာနဲ့ အပိုင်းခွဲလိုက်ပြီနော်)
(Note-FanFic ဖြစ်သည့်အတွက် တချို့အကြောင်းအရာများမှာ အမှန်မဟုတ်ပါ)
ကမ္ဘာ ကျော် အဆိုတော်အဖွဲ့ မိန်းကလေး၉ယောက်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော
Girls' Generation.. ..... အဖွဲ့ဝင်များ ဘဝတွင် ဝမ်းအနည်းရဆုံးသော နေ့တနေ့
SNSD member တို့နှင့်အတူ ပရိသတ်ဖြစ်သော Sones တို့ မျက်ရည်ပူများကျခဲ့ရသောနေ့တနေ့.......
K-Pop ဂီတလောကတွင် အကြီးမားဆုံးသော ဂယက်ကြီးထခဲ့သောနေ့တနေ့......
ကမ္ဘာ က Barbie girl ဟု တင်စားထိုက်သော Ice princess ဂုဏ်ပုဒ်ရှိသော member များသာမက sones တို့ချစ်ခင်ရသော Jessica အဖွဲ့မှ ထွက်သည့်နေ့ပင်စြဖ်လေသည်။ အဖွဲ့ဝင်များမှာလဲ တားဆီးနိက်ိသည့် အစွမ်းအစ မရှိခဲ့.........
Jessica မထွက်ခင်၂ညအလို September 28......
SM Entertainment ၏ CEO Kim Young Min, SNSD leader Taeyeon ကို သူ့ရုံးခန်းကိုလာစေခဲ့သည်
Kym-ခု မင်းကိုခေါ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို သိလား
Kym-မင်းအဖွဲ့ထဲက Jessica ကို
5.6K 740 201
The final part of the "LIMBO" Trilogy.
With Choi Siwon
And Byung Hoon Lee
Written by R-tist Phyo.
48K 2.8K 391
5.1K 949 108
Credit to original cover photo.
24.7K 1.6K 406
Taengsic Myanmar Fanfiction
အနည် ??? အရေးမပါတဲ့ အရာတစ်ခုပါ.....အဲ့လိုပဲ ကျွန်မကလည်း သူ့အတွက် အရောင် မှိန်ဝါးဝါး အနည် တစ်ခုပါ  #Taeyeon
[Fav author Gobi Taoris ရဲ့ Greyish Dregs ရဲ့ ဇာတ်လမ်း အသွားအလာကို cover ပြန်လုပ်ထားတာပါ]
A Cup of Love Sake 2
6K 739 175
နိဟွန်းသူလေးYoonaနှင့်Jessicaတို့၏ Yoonsicအဖွဲ့သည် အာရှ၌ အလွန်အောင်မြင်သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Yoonaက အဆိုပိုင်းတွင်ထက်သရုပ်ဆောင်ဘက်တွင် ပိုမိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ Jessicaသည်လည်း နဂိုကတည်းက ပါရမီရှိသူပီပီ အဆိုပိုင်းတွင် ပိုမိုနာမည်ရလာခဲ့သည်။
သူတို့အတွက်ရှေ့လျှောက်ဘဝ၌ပျော်ရွှင်စရာများသာ ကြုံတွေ့ရမည်ဟုမျှော်မှန်းရသော်လည်း မမျှော်လင့်သော အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြောင့်..............................
25.3K 2.3K 729
34.6K 2.9K 192
Taeyeon ရဲ့ အိမ်မက်က အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့။ သူဟာငယ်ငယ်လေးကတည်းက သီချင်းဆိုတာကို အရမ်းဝါသနာပါခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့အဖေက အဆိုတော်လုပ်မယ့်ကိစ္စကိုသဘောမတူဘူး။
သူတက်တဲ့ အကသင်တန်းမှာ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး သူတို့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်အတွက် အခွင့်အရေး တစ်ခုရခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Jeguk Art High School ကို တက်ဖို့အခွင့်အရေးပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့အိမ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တဲ့ အဲ့ဒီကျောင်းမှာ တက်ဖို့အတွက်ဆို သူတို့က ယောက်ျားလေးလိုဝတ်မှရမယ်။
Jeguk Art High School ရဲ့ Queen နဲ့ တွေ့ဆုံလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ Taeyeon ရဲ့ ဘဝဟာ လုံးဝကို အနိမ့်အမြင့်တွေနဲ့ ပြောင်းလဲသွားတယ်။
Starring: Kim Taeyeon & Tiffany Hwang
Written by: Taengoo Thant